मनीषाको राजनीति फेरियो | Home
मनीषाको राजनीति फेरियो
Posted on December 25, 2009 by Yonepal	दुई दशक लामो अन्तरालपछि बल्लतल्ल मनीषा कोइरालाले अभिनय गर्ने भनिएको नेपाली चलचित्रको शीर्षक अन्तिम समयमा फेरियो । बलिउडका नायक गोविन्दा आएर चलचित्र ‘राजनीति’ को मुहूर्त गरिसकेपछि छायांकन हुने अन्तिम सन्ध्यामा किन फेरियो त शीर्षक ? राजनीतिले च्यापेको मुलुकमा बन्ने यो चलचित्रको शीर्षक समय- परिस्थितिअनुरूप दुरुस्तै थियो भने शीर्षक तार्किक पनि थियो । यद्यपि देशको राजनीतिबाट वाक्क भएका जनताले राजनीति शीर्षकको चलचित्र हेर्न उत्सुकता देखाएनन् भने के गर्ने ? भन्ने शंका निर्माणपक्षलाई भएछ । त्यसमाथि नायिका मनीषाको घरेलु पृष्ठभूमि राजनीति, चलचित्रकी निर्मात्री डा. दुर्गा पोखरेल पनि पूर्वमन्त्री भैसकेकीले राजनीतिबाट दुवै जना वाक्क भएको पनि सुनियो । माघ ७ गतेदेखि पोखराबाट छायांकन थालिने चलचित्रको नयाँ शीर्षक निर्देशक दीपेन्द्र के. खनालले जुराए ‘धर्मा’ । फेरि हिन्दी चलचित्रसँग मिल्दो शीर्षकचाहिँ किन ? दीपेन्द्रले भने- ‘चलचित्रको शीर्ष चरित्रको नाम भएकाले ।’ कसले निर्वाह गर्दैछ त्यो चरित्र ? उनले भने- ‘दुई जना नायक छन् राजेश हमाल र विराज भट्ट । चलचित्रमा यी दुईमध्ये एक जनाको नाम धर्मा हो ।’ २०१० को मे २८ मा बलिउडबाट यही शीर्षकमा एउटा चलचित्र सार्वजनिक हुँदै छ, नेपाली ‘राजनीति’लाई ‘धर्मा’ बनाउनुका पछाडि यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ । कान्तिपुर साप्ताहिक
Filed under: Headlines « युवतीसँगै भेटिए तपस्वी सुपर सेक्सका आठ सूत्र »